UMboweni uthi ngeke kube lula ukuvuka komnotho wakuleli - Ilanga News
Home Izindaba UMboweni uthi ngeke kube lula ukuvuka komnotho wakuleli
UMboweni uthi ngeke kube lula ukuvuka komnotho wakuleli
UNGQONGQOSHE wezeMali, uMnu Tito Mboweni, usexwayise ngokuthi ukuvuka komnotho waseNingizimu Afrika ngeke kube lula, kuzodinga uhulumeni uthathe izinyathelo ezinqala zokushintsha ukusebenza kwawo.
UNGQONGQOSHE wezeMali, uMnu Tito Mboweni, usexwayise ngokuthi ukuvuka komnotho waseNingizimu Afrika ngonyaka ozayo ngeke kube lula, kuzodinga uhulumeni uthathe izinyathelo ezinqala zokushintsha ukusebenza komnotho wezwe.
Isexwayiso sakhe sikhomba ukuthi umnotho wakuleli usazothwala kanzima iminyaka eminingana ezayo. Lokhu kusho ukwanda kwabantu abantula imisebenzi, abadla imbuya ngothi nokuncipha kwamandla kahulumeni okweseka abahluphekile.
UMnu Mboweni usho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabatshalimali kuleli emhlanganweni obuyinguyazana obubizwe yibhange lase-USA, iGoldman Sachs.
Uthe umnotho wakuleli uzoncipha ngo-6.4% kulo nyaka, okuyisi-balo esingaphezulu kwalesi ebesibikezelwe yi-International Monetary Fund (IMF).
Ubikezele nokuthi intela ezoqoqwa nonyaka ingase inciphe ngo-32%. Uhulumeni ubebikezele ukuthi uzoqoqa intela ka-R1.4 trillion kulo nyakamali.
Imali yentela eqoqwayo incike kakhulu esimeni somnotho, ingxenye enkulu yayo iqoqwa kubantu abathola imiholo, iVAT bese kulandela leyo eqoqwa enzuzweni yezinkampani.
Ukwanda kwabantu abangasebenzi nokwehla kwenzuzo eyenziwa yizinkampani, ikakhulukazi ngenxa yokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho okudalwe wukubheduka kwe-coronavirus kusho ukuncipha kwentela.
Ngaphezu kwalokho, kusho ukuthi imali yeVAT ngeke itholakale njengoba amabhizinisi amaningi evaliwe.
Uqhubeke wathi isibikezelo se-IMF sokuthi umnotho wakuleli uzokwenyuka ngo-4% ngonyaka ozayo singafezeka, kodwa ugcizelele ukuthi ukuvuka komnotho wakuleli kuyoncika kakhulu ekuphumeleleni kukahulumeni ukwenza izinguquko endleleni osebenza ngayo umnotho.
Uqhubeke wathi kuyodinga ukuba ezinye izimboni zakuleli zesekwe ngezindodla zemali ukuze zikwazi ukuzivuselela njengoba zihlukumezekile ngokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho wezwe.
Emzamweni wokweseka izisebenzi, abampofu nosomabhizinisi, uhulumeni ukhiphe u-R500
billion. U-R130 billion wale mali uzoxetshulwa esabelweni semali salo nyaka esethulwa nguMnu Mboweni ephalamende ngoNhlo-lanja (February).
Lokhu kusho ukuthi ezinye izinhlelo zikahulumeni zizomiswa nonyaka. Izikhulu zoMnyango wezeMali zithi kuzomiswa kakhulu izinhlelo ezibhekene nokulungiswa nokwakhiwa kwengqalasizinda. Ingqalasizinda inemikhakha emibili; kukhona ebhekene nokusebenza komnotho nebheke-ne nezidingo zomphakathi.
Akukacaci ukuthi iyiphi okuzo-xetshulwa kuyo kakhulu.
Imininingwane ngalokhu izovela uma uMnu Mboweni esethula ephalamende isichibiyelo sesabelomali.
Lokhu kuxetshulwa kwesabelomali sengqalasizinda ngeke kube namthelela omuhle nokho. Uma kuxetshulwe kakhulu ngakwezomnotho, kuyosho ukuthi ukuvuselelwa komnotho wakuleli kuyothatha isikhathi eside.
Izinguquko akhuluma ngazo uMnu Mboweni ziqukethwe wumqulu owakhishwa wuMnyango wezeMali ngonyaka owedlule.
Lezi zinguquko zixube ukuthu-thukiswa kwezimboni ezifana nezokuxhumana, ezokuthutha impahla nezikhumulo zemikhumbi namabhanoyi. Ezinye zithinta ukususwa kwezihibe ezenza kube lukhuni ukuqalwa kwamabhizinisi, ikakhulukazi lawo aqalwa ngabampisholo.
Ziphinde zixube ukubekwa phambili ukuvulwa kwezimboni eziqasha abantu abaningi kunalezo ezisebenzisa kakhulu imishini ukukhiqiza impahla.
UMnyango wezeMali wabikezela ukuthi uma zenziwe lezi zinguquko, zingenyusa izinga lokukhula komnotho ngo-2.3%, zidale namathuba emisebenzi angaphezulu kuka-1 million.
Lezi zinguquko ekusebenzeni komnotho uMnu Mboweni akhuluma ngazo, kaziwona umlingo.
Uma uhulumeni uphumelela ukuzenza, akukho siqiniseko so-kuthi ziyovusa umnotho wezwe masinyane.
Maningi amazwe enza izinguquko, kodwa kuthathe iminyaka ukuthi kubonakale imiphumela yazo etheni.
Okwesibili, akusho ukuthi ziyoba nemiphumela efinyelela esibikezelweni. Kungenzeka futhi uhulumeni ungaphumeleli ukuzenza lezo zinguquko, okuyinto esiyinhlalayenza kuleli.
Sekukaningi uhulumeni uthembisa ukwenza lezi zinguquko kodwa sekuphele iminyaka ingabonakali inqubekela phambili.
Ngaphezu kwalokho, amadlelandawonye e-ANC, iSACP neCosatu, kawavumelani ngokuthi nhloboni yezinguquko okumele zenziwe.
Yingakho nje uMnu Mboweni etshele abatshalimali ukuthi yena nozakwabo sebemnkatshubomvu, ngakho akasenasikhathi sokudla ingevu ngezimpikiswano ayezenza esesesikoleni.
Inkulumo kaMnu Mboweni ikhomba ukuthi akukho ukubona ngaso linye mayelana nezinguquko ezidingekayo ukuze kufukulwe umnotho wezwe.
Noma engaphumelela ukuze-nza lezi zinguquko uMnu Mbowe-ni, usumkhulu kakhulu umgodi okumele uvalwe ngenxa yokuhlukumezeka komnotho ngenxa ye-coronavirus.
Sizobe sesandile isibalo sabantu abantula umsebenzi, okusho ukuthi noma izinguquko zingadala amathuba emisebenzi anga-phezulu kuka-1 million, kuyoba ngamaconsi nje.
Izinga lokukhula komnotho nalo liyobe selehlile kakhulu, kodwa uma kuwukuthi kazenziwa lezi zinguquko, umnotho wakuleli uyoqhubeka ucwile. USikhakhane, oke wasebenza njengomkhulumeli kaNgqongqoshe wezezimali kanye nebhange lezwe, useyiphini lomhleli weConversation Africa. Lokhu akubhala lapha akuyona imibono yomqashi wakhe.
Previous articleUmuntu usengaze aboshelwe ukuya elavathi ngenxa ye-corona
Next articleMasifunde ukufingqa imikhono, singathembeli kubaqashi kuphela